ढोरपाटनमा शिकारीले यसपटक के के मार्न पाउँछ ? – Akhabar Today
ढोरपाटनमा शिकारीले यसपटक के के मार्न पाउँछ ?
बलेवा, १३ चैत । विदेशी साहसी शिकारीको रोजाइमा पर्ने नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटनमा दोस्रो सिजनको शिकार सुरु हुने भएको छ ।
नेपाली र विदेशी जुनसुकै नागरिकले पाउने भएपनि अहिलेसम्म विदेशी शिकारीले मात्रै अनुमति लिएर शिकार गरिरहेका छन् । स्थानीय सहयोगीका रूपमा भने उनीहरूले बागलुङलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक शिकारीलाई साथ लिने गरेका छन् ।